Black star moonstone pụtara na ihe onwunwe - video
Black kpakpando moonstone
Tags nwa, Nwa ojii, Moonstone, kpakpando
Black kpakpando moonstone pụtara na ihe onwunwe.
Naturalzụta eke ojii kpakpando moonstone na ụlọ ahịa anyị
Black moonstone bụ sodium potassium aluminum silicate na usoro ọgwụ (Na, K) AlSi3O8 ma bụrụ nke ìgwè feldspar.
Aha ya sitere na mmetụta a na-ahụ anya, ma ọ bụ sheen, n'ihi mmịnye ọkụ dị n'ime ihe ntanetị nke na-agụnye ụda feldspar mgbe niile (lamellae).
Anyị jiri ọla na ọla mee ọla maka puku afọ, gụnyere mmepeanya oge ochie. Ndi Rome nwere mmasi na egwuru-egwu a, dika ha kwenyere na ya sitere na uwume nke ọnwa. Ma ndị Rom ma ndị Grik jikọtara moonstone na chi dị iche iche nke ọnwa. N’oge na-adịbeghị anya akụkọ. Ọ ghọrọ ihe a ma ama n’oge Art Nouveau. Onye na-ahụ maka ọla edo French René Lalique na ọtụtụ ndị ọzọ mepụtara ọla buru ibu buru ibu site na iji okwute a.
Ihe a na-ahụkarịkarị bụ site na adularia nke mineral, nke a na-akpọ maka ebe a na-egwupụta akụ dị na nso ugwu Adular na Switzerland, ugbu a bụ obodo St. Gotthard. Plagioclase feldspar oligoclase na-ewepụtakwa ụdị okwute. Ọ bụ feldspar nwere obere okwute na opalescent opalescent. Aha ozo bu hecatolite.
Orthoclase na albite
Black moonstone nwere ụdị feldspar abụọ, ntụgharị na albite. A na-ejikọta ụdị abụọ ahụ. Mgbe ahụ, dịka akụrụngwa ahụ a kpụpụtara ọhụrụ na-eme ka obi dị jụụ, nkwụsị nke ntụgharị na albite na-ekewapụ ya na nsị.
Adularescence bụ ihe ngosi na-acha anụnụ anụnụ na-atụgharị uche na domed cabochon elu nke kpakpando ojii moonstone. Ihe ngosi nke shimmer sitere na mmekọrịta nke ìhè na oyi akwa nke obere "albite" kristal na moonstones. Ezie na ọkpụrụkpụ nke oyi akwa nke obere kristal ndị a na-ekpebi àgwà nke -acha anụnụ anụnụ shimmer. Ya mere, thinner na oyi akwa, mma-acha anụnụ anụnụ flash. Nke a na - apụtakarị dị ka mmetụta nchapụta ọkụ.
Nkwụnye ego moonstone na Armenia (ọkachasị site na Lake Sevan), yana Australia, Alps nke Austrian, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka na United States.
Ọzọkwa, moonstone bụ Florida State Gemstone (USA). E kenyere ya dị ka nke a na 1970 iji cheta ọdịda ọnwa, nke si na Kennedy Space Center pụọ. N'agbanyeghị na ọ bụ Florida State Gemstone, ọ naghị adabara na steeti.
Feldspars bụ otu mineral na-emepụta tectosilicate nke mejupụtara ihe dịka 41% nke jikọrọ ọnụ ụwa site na ịdị arọ.
Ọ na-eti mkpu site na magma dị ka veins na ma intrusive na extrusive nkume dị egwu ma na-ahụ na ọtụtụ ụdị nke nkume metamorphic.
Black kpakpando moonstone pụtara na ihe onwunwe
Okwute nwere ike siri ike iji nyere gị aka ijikọta na nwanyị nwanyị n'oge ntụgharị uche. Dị ka ọmarịcha egwurugwu moonstone kristal, ha na-ada ụda n'ime chakras kachasị elu, nke nwere ike inye aka na mmepe nke onyinye uche. Omume ha dị irè n'ime sacral ma ọ bụ otube chakra iji nyere aka na ntopute nke echiche ọhụụ na nke ọhụụ.
Black moonstone n'okpuru microscope
Ndi labradorite bu oji moonstone?
A na-ekepụta Labradorite dị ka plagioclase na calcium sodium feldspar. Moonstone bụ orthoclase na potassium sodium feldspar. Ọ bụ ya mere moonstone na labradorite ji bụrụ nwanne nwanyị. ha bụ otu ezinụlọ mana gemologically ha dị iche.
Nwa moonstone dị ụkọ?
Ọ dị oke ụkọ n'ihi otu esi abịa na ebe ị nwere ike ịchọta ha. The moonstone bụ ụkọ nke moonstones niile dị ka egwurugwu moonstone na-acha ọcha moonstone.
Kedu ka isi mara ma nwa ojii ojii moonstone ọ dị adị?
Ọchịchọ kwesịrị ịdị na-acha anụnụ anụnụ. A ga-ahụ sheen ahụ n'okpuru ọkụ n'elu cabochon, ọ ga-ahụkwa nke ọma site n'ọtụtụ akụkụ ikiri.
Naturalzụta eke ojii kpakpando moonstone na ụlọ ahịa anyị bara nnukwu uru
Tags Moonstone, eke na egwurugwu, egwurugwu; moonstone
Tags Safaya, kpakpando
20% Ego na moonstone.
* dị ruo Eprel 30, 2021